Inthanethi – Android – Vessoft
I-Chrome – isiphequluli esisheshayo nesiphephile ngokusekelwa kobuchwepheshe besimanje. Isoftware iqukethe imodi engaziwa ukuvimbela ukulondolozwa komlando wamawebhusayithi abukiwe.
I-Google Amamephu – isoftware ekhombisa ngokunembile amazwe noma izifunda futhi inqume ngokuzenzakalelayo imizila. Futhi i-software isekela ukuzulazula kwe-GPS GPS yezimoto nezinye izinhlobo zezinto zokuhamba.
Ithuluzi elula for the management imeyili. Isofthiwe bahlunga ngokuzenzakalelayo imeyili by ukubaluleka futhi likuvumela ukususa ngokushesha noma imilayezo archive.
Isicelo nge inqwaba izincomo kanye nokubuyekezwa lezihambi sokuhlelwa travel emhlabeni wonke. Isofthiwe inikeza ulwazi mayelana uhlobo wezokuThutha ukuba kuhanjwe iholidi.
Ithuluzi for the ukuxhumana phakathi abasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze Voice namakholi wevidiyo noma wabelane imiyalezo.
An lula ukufunda iklayenti sesifufula nge iqoqo amathuluzi awusizo ukulungisa ifayela izidingo umsebenzisi.